September 2019 - POPPIN NEW
ဗစ်တိုးရီးယားလေးက ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲကအတိုင်း ကိုကိုအငယ်နဲ့ ကိုကိုအကြီးလို့ တရားရုံးမှာ ထွက်ဆို
Pop Pin New September 11, 2019
ဗစ်တိုးရီးယားလေးက ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲကအတိုင်း ကိုကိုအငယ်နဲ့ ကိုကိုအကြီးလို့ တရားရုံးမှာ ထွက်ဆို ယနေ့ စက်တင်ဘာလ(၁၁)ရက်နေ့ ဗစ်တိုးရီးယားအမှုရဲ့ ခြောက်ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းမှာ ဗစ်တိုးရီးယားလေးကို ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်(Video Conferencing) စနစ်ဖြင့် နေပြည်တော် ဒက္ခိဏခရိုင် တရားရုံးမှာ ကို စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ပြည်သူအများ စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ သည်ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှာ ဗစ်တိုးရီးလေးကိုယ်တိုင် တရားခွင်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် တရားရုံးမှာ ကိုကိုအငယ်နဲ့ ကိုကိုအကြီးလို့ …
Dr. Mya Wut Yee က သူ့အဆက်အသွယ်နဲ့သူ ကျူးလွန်တဲ့ လူတွေ လိပ်စာ ရော နာမည်ရော စုံစမ်းပြီး ညကမှ ရဲဆီ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပေး အင်္ကျီအမည်းနဲ့တစ်ယောက်က ရွာမအရှေ့ အင်းစိန် မှာနေတဲ့ စစ်ဗိုလ်ထွက် ဝက်အူလှည့်နဲ့ ထိုးသတ်တဲ့ (ရှောင်လို့ လွတ်တာနော်) တစ်ယောက်က ရွှေပြည်သာက သူက ဖေတွေ ဖာတွေ …
နှာစေး၊ နှာမွှန်၊ နှာရည်ယို နှာခေါင်းပိတ်တာ မှန်သမျှအတွက် ထင်မထားလောက်အောင် လွယ်ကူစွာ အမြန်ပျောက်သည့်နည်း…
နှာစေး၊ နှာပိတ်၊ ရင်ကြပ်ခြင်းအတွက် ဆေးတစ်ခွက် နှာစေးခြင်း၊ နှာပိတ်ခြင်းနှင့် ရင်ကြပ်ခြင်းဆိုတဲ့ ရောဂါဟာ လူတိုင်းလူလူ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်… ရောဂါအသေးလေးမို့လို့ဆိုပီးတော့ ပေ့ါဆတော့မနေသင့်ပါဖူး …. အခုပြောပြမယ့် ဆေးနည်းလေးကတော့ အိမ်တွင်းဖြစ်ဆေးနည်းလေးပါ …. အရမ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်…. အရမ်းလဲလွယ်ကူပါတယ် ….. သင်စမ်းသပ်သောက်လို့ တကယ်ပျောက်ကင်းတယ်ဆိုရင် ရှယ်ပေးလိုက်ပါ… ကုသိုလ်ရပါတယ်…. ဆေးနည်းလေးကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်… ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ရေနွေးပန်ကန်ထဲ ဂျင်းကိုအနေတော် …
ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုံ့ချပါတယ် မုဒိမ်းမှုကို သေဒဏ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ နိုင်ငံကြီးမှာ ပရမ်းပတာတွေကိုဖြစ်လို့
ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုံ့ချပါတယ် မုဒိမ်းမှုကို သေဒဏ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ နိုင်ငံကြီးမှာ ပရမ်းပတာတွေကိုဖြစ်လို့ မုဒိမ်းကျင့်မဲ့ ဇာတ်ကောင်အတွက် အခမ်းနားနဲ့ရွေးချယ် စင်ပေါ်တက် သရုပ်ဆောင်ပြ ၊ live လွှင့် ကြည့်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေက သဘောကျ လက်ခုပ်တွေတီး ၊ လိုင်းပေါ်မှာ ရှယ် ကြ အို ဘာတဲ့ မုဒိမ်းမှု့ကို သေဒဏ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာ ပရမ်းပတာတွေကိုဖြစ်လို့… အဟက် ! ဂျင်းမြမြ… …
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် သမီးအရင်းကို ဖခင်ဖြစ်သူက အဓမ္မအကြိမ်ကြိမ် ပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် အသက် ၁၃နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်အား ဖခင်ဖြစ်သူက အဓမ္မအကြိမ်ကြိမ် ပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ အမှတ် ၁၈ရပ်ကွက်၊ ဒေါ်ဖွားရှင်လမ်း(ကျူး) အခန်း ၃၌ သမီးကြီးဆုံးဖြစ်သည့် ၁၃နှစ်အရွယ် သမီးကို ဖခင်ဖြစ်သူက သားမယားပြုကျင့်နေကြောင်း စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ မိခင်ဖြစ်သူထံ ပြောပြ၍ သိရကြောင်း ဆိုသည်။ “အမေ သမီးမနေရဲတော့ဘူး …
တံခါးပိတ်ပီး ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေတာတောင် မလုံခြုံတော့ပါလား(ရုပ်သံ)
တံခါးပိတ်ပီး ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေတာတောင် မလုံခြုံတော့ပါလား(ရုပ်သံ) အားလုံးသတိထားကြပါ….. ခေတ်ကြီးက အရမ်းကိုကြောက်ဖို့ကောင်းလာနေပါပီ …. သတိ၊ ၀ီရိယလေးနဲ့ နေထိုင်ကြပါ…. သူများပစ္စည်း အချောင်လိုချင်နေတဲ့သူတွေက တစ်နေ့တစ်ခြား များများလိုက်လာနေပါပီ … ခုလဲကြည့်ပလား ကိုယ့်အိမ်မှာ ကိုယ်နေတာတောင် အချောင်သမား လုယက်သမားက အိမ်လိပ်စာမေးတာလိုလိုနဲ့ ဆွဲကြိုးလုပြေးတာ …. တော်သေးတာပ ဓားနဲ့ထိုးလုသွားတာ ၊ ရိုက်ပီးလုသွားတာ မဟုတ်လို့ ….အဲ့လိုကောင်တွေလဲ …
မိုးမျှော်နေတဲ့တောင်သူတွေအတွက် …. လာပြီနော် မုန်တိုင်းတွေ…..